Wasaaradda arimaha gudaha oo raashiin u qeybisay isbitaalo ku yaala Muqdisho – Radio Muqdisho
Deeqdan maanta wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka ay gaarsiisay lix isbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana ay kamid ahaayeen isbitaalada Madiina iyo isbitaalka xooga dalka ayaa waxaa ay qeyb ka aheyd raashiinkii walaalaha Turkiga ay ugu talagaleen dadka Soomaaliyeed.
Dr. Maxamed Yuusuf oo ah agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in ay ku faraxsanyihiin deeqdan la soo gaarsiiyay isla markaana si cadaalad ah u gaarsiin doonaan bukaanada ku jira isbitaalka.
Raashiinkan oo ka kooban Bur iyo Sonkor ayaa waxaa sidoo kale dhakhaatiir ka soctay isbitaalada kale oo maanta deeqdan ka faa’ideystay ay dhankooda sheegeen in ay u mahadcelinayaan dowladda Turkiga iyo wasaaradda arimaha gudaha oo soo gaariisay raashiinkan.
Agaasimaha guud ee wasaaradda arimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya C/laahi Maxamed Xasan (Azhari) ayaa tilmaamay in qorshahan uu kamid ah mid lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed kuwooda liita isla markaana meelo kale la gaarsiin doona deeqdan raashiinka ah.
C/laahi Maxamed Xasan oo ah agaasimaha wasaaradda arimaha gudaha ayaa sidoo kale xusay in la dardargelin doona howlaha raashiin qeybinta ah. Isagoo sheegay in horey ay deeq sidan oo kale ah ay gaarsiiyeen xeryaha ay ku jiraan dadka barkacyaasha ah ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya oo gaaray Baydhabo